အသက်ရှူကြပ်တယ် မောတယ်ဆိုတာ ... | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
● လူက နေလို့မကောင်းတာ
ဒါဟာ နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို အဆုတ်မှာ ပြဿနာတစ်ခုခု ရှိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
>> ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်ပြရမလဲ?
● မောတာက ၁ လလောက်ရှိပြီဆိုရင်
● လှုပ်ရှားလိုက်လို့ ပိုမောရင်
● လှဲအိပ်တဲ့အခါ မောရင်
● ချောင်းဆိုးတာ ၃ ပတ်နဲ့ အထက်ဆိုရင်
● ခြေထောက်တွေ ဖောလာရင်
တကယ်အရေးကြီးတဲ့ရောဂါ ဖြစ်နေလားဆိုတာ စစ်ဆေးကြည့်မှ သိနိုင်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့ တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
>> ဘာကြောင့် မောတာဖြစ်နိုင်လဲ?
အဖြစ်များတာတွေကတော့ အအေးမိလို့၊ အဆုတ်ထဲပိုးဝင်တာ၊ အဝလွန်တာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တာတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေလည်း စိတ်လှုပ်ရှားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ရောဂါတွေက နာတာရှည် အဆုတ်ရောဂါတို့ အဆုတ်ကင်ဆာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုကုသမှုမျိုး လိုအပ်တာလဲဆိုတာက ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာကို ဘယ်တော့မှ ရောဂါနာမည်တပ်ဖို့ မလုပ်ဘဲ ဆရာဝန်နဲ့ ပြပေးပါ။